गलिसियन ग्यास्ट्रोनोमी - यस भूमिको सबैभन्दा परम्परागत भाँडा | Absolut यात्रा
सुसाना Godoy | | España
La गैलिसियन ग्यास्ट्रोनोमी यो सबैभन्दा विविध छ। आधारभूत र साधारण सामग्रीको साथ भाँडा माझ्छ, तर त्यसले समुद्र र भूमिको संयोजन प्रदान गर्दछ। क्षेत्रबाट उत्पादनहरू जम्मा गर्नुको साथै, प्रत्येक टोकाइ वास्तविक भोजमा परिणत हुन्छ, जसले व्यञ्जनहरू जहिले पनि पीढीबाट अर्को पुस्ता रहन्छ।
दुबै खाना, र पिउने कुरा त्यस्तो छ जुन हामीसँग कुरा गर्दा सँधै उपलब्ध हुन्छ गैलिसियन ग्यास्ट्रोनोमी। यसको प्रत्येक प्रान्तको परम्परागत सारांश तलका भाँडामा वर्णन गर्न सकिन्छ जुन हामी उल्लेख गर्दै छौं। यद्यपि त्यहाँ अरुहरु छन् जुन तपाईले मात्र चाख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाई यस देश मीगासले भरिएको भ्रमण गर्नुहुन्छ।
1 अक्टोपस, पोल्बो फेरा, ग्यालिश ग्यास्ट्रोनोमीको पहिलो डिश
2 ग्यालिसियन ब्रोथ
3 गैलिसियन पाई
4 शलजम शीर्षमा ल्याकन
5 स्यान्टियागोको केक
6 चुर्रास्को, गलिसियाको ग्यास्ट्रोनमी भित्र आधारभूत मासु
7 समुद्री खाना
8 Padrón खुर्सानी
9 फ्रिक्स वा फिलोआस
10 कफि लिकुर वा पोमेस क्रीम?
अक्टोपस, पोल्बो फेरा, ग्यालिश ग्यास्ट्रोनोमीको पहिलो डिश
यो परम्परागत रेसिपीहरूमध्ये एक हो, वास्तवमा त्यहाँ गलिसियाका धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ उनीहरूसँग यो स्वादिष्ट व्यंजनको लागि आफ्नै पार्टी छ। यो पनि सत्य हो अक्टोपस विभिन्न तरिकाले तयार गर्न सकिन्छ, तर ग्यालशियन परम्पराले छनौट गर्दछ à फीरा। नाम क्लासिक मेलाबाट आउँदछ जुन ओरेन्बे प्रान्तको ओ कार्बल्लीयोमा आयोजना गरिएको थियो। तिनीकहाँ आएका व्यक्तिहरूलाई खुवाउन, त्यहाँ अक्टोपसको तयारी थियो र अलि-अलि गर्दै यो इलाकाभरि फैलियो।
आज सम्म सबै जिज्ञासुहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने केहि। आधार अक्टोपस पकाउनु हो, यसलाई सानो टुक्रा वा स्लाइसमा काट्नुहोस्, नुन, पेपरिका र राम्रो तेल थप्नुहोस्। कहिलेकाँही यो 'क्याचलोस' को साथ पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, अर्थात, अक्टोपस जस्तो पानीमा आलु पकाउनुहोस्। तपाईं तिनीहरूलाई टुक्रा वा पातलो स्लाइसमा काट्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई एक्लै वा अक्टोपसको साथ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ जुन सँधै काठको प्लेटमा जान्छ।
चिसो महिना को लागी एक मुख्य पकवान। को ग्यालिसियन सूप यो ग्रीस वा फ्याटको आधारले बनेको हुन्छ, जसमा काँध वा बेकन र रिब जस्ता मासु थपिन्छ। Chorizo, सेतो सिमी, आलु र पनी, तरकारी बिर्सनुभयो। यस अवस्थामा सबै भन्दा अनुरोध गरिएको जहिले पनि शलगम सागहरू हुन्, तर तिनीहरू शलजम वा गोभी पनि हुन सक्छन्। यद्यपि पछिल्लो अवस्थामा, शोरबाले मीठो स्वाद पाउनेछ र नुनको टचलाई समायोजित गर्नुपर्नेछ। सबै सामग्रीहरू धेरै ठूलो भाँडोमा थपिन्छन् र खाना पकाउन पानीले भरिन्छ। हो, परिणाम उत्तम भन्दा बढि छ!
एक एपिरेटिफको रूपमा, यो एक सबैभन्दा लोकप्रिय हो। यो मेला वा बजार वा बेकरी र सुपरमार्केटमा पनि पाउन सकिन्छ। गैलिशियन एम्पानाडाले धेरै सामग्रीहरू स्वीकार गर्दछन्, त्यसकारण टुना माछा आधारभूत मध्ये एक हो, त्यहाँ सबैभन्दा प्रसिद्ध बीचमा मासु वा कड माछा पनि छ। तर हामी यो बिर्सन सक्दैनौं कि यसले स्ल्यालप, कन्जर ईल, सिपी कीरा, अक्टोपस र यी सबै चीजहरू प्याज र पेपरिकाको साथको ससको अंश हो जसले एम्पानेडा नै निम्त्याउँदछ।
शलजम शीर्षमा ल्याकन
फेरी, गलिसियाको ग्यास्ट्रोनमीको ती विशिष्ट भाँसाहरू मध्ये अर्को। यसको नामले भने जस्तै, एकातिर त्यो मासु छ जुन छ सुँगुर काँध, जुन यसको अगाडि अ from्गबाट ​​प्राप्त गरिएको छ। नमकीन स्पर्शको साथ मांस जुन तरकारीहरूसँग पकाइन्छ जुन शलजम सागका बाहेक अरू केही हुँदैन। कहिलेकाँही तपाईं केहि भान्सा आलु पनि थप्न सक्नुहुन्छ। तर यो जस्तो हुन सक्छ, यो ती स्वादिष्ट पदार्थहरू मध्ये एक हो जुन जाडोको सबैभन्दा चिसो दिनको लागि पनि अनुकूल छ।
यति धेरै मुख्य खाना र एक अपरिटिफ मध्ये, यो मिठाईको पालो हो। किनभने त्यहाँ धेरै छन्, तर मुख्य मध्ये एक टार्टा डे स्यान्टियागो हो। तपाईंले यसलाई चिन्नुहुनेछ किनभने यो चिनी चिनीले कभर गरिएको छ र यसमा स्यान्टियागोको क्रस कोरिएको छ। यसको अज्ञात उत्पत्ति छ तर अवश्य हामी जान्दछौं कि धेरै बर्षदेखि यो पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा बितिसकेको छ। यसको अवयवहरू मध्ये हामीले फेला पार्‍यौं कि बदामहरू यसको आधार हुन्, साथै चिनी, अण्डा र तिनीहरू प्राय: पीठो बोक्दैनन्.
चुर्रास्को, गलिसियाको ग्यास्ट्रोनमी भित्र आधारभूत मासु
धेरै समारोहहरूमा यो पौराणिक हो कि त्यहाँ पहिले इम्मानाडा हुन्छ र त्यसपछि ... चुरस्को! किनभने यो प्राय: राम्रो मौसम आउँदा, बारबेक्यु र साथीहरूको जमघटमा गरिन्छ। तर यो सत्य हो कि एक राम्रो स्टेक कुनै पनि समय रेस्टुरेन्टहरूमा भेट्टाउन सकिन्छ। छन् सुंगुर र मासु को पसल छनौट गरिएको मासु, साथ साथै क्रियोल सॉसेज। मासु म्यारिनेट गर्नुपर्दछ र त्यसपछि ग्रिलमा गर्नुपर्नेछ। किनकि इम्बरहरूले अन्तिम टच दिन्छ। यो सत्य हो कि तिनीहरूसँग बारबेक्यूको लागि मसला मिसाइएको सॉसको साथ पनि हुन सक्छ। फ्रान्सेज फ्राइज र सलाद टेबलका लागि साइड डिश हुन्।
यदि तपाईं मासु र चुर्रास्कोको अधिक हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईंले राम्रोलाई होईन भन्नु हुँदैन गलिसियामा समुद्री खाना। किनभने यो स्थानीय उत्पादनहरू बारे हो, ताजा र सबै स्वादको साथ। तपाईं एक राम्रो समुद्री खाना प्लेटर स्वादको लागि सक्षम हुनुहुनेछ र यसमा, समुद्री भोजनको बिभिन्न प्रकारहरू जुन ग्लोरिया जस्तो स्वाद हुनेछ। सब भन्दा साधारण खाद्य पदार्थ जुन हामी यसमा भेट्न लाग्छौं तिनीहरू क्रेफिश र झींगा हुन्, स्वादिष्ट बार्न्कल नहुने, साथसाथै क्राब्स वा मकड़ीका केकाहरू, अन्यमा। को scallops albariño or compostelana उल्लेखनीय छन्।
यदि churrasco संग तपाईं केहि चाहानुहुन्छ खुर्सानी, कि तिनीहरू Padrón बाट हो। किन? 'किनभने uns Biteeoutros, गैर'। त्यसोभए त्यहाँ साहसिक कार्य छ यदि तपाइँ एक मिठाई मिर्च वा मसलादार मिसाई चबाउनुहुन्छ। यस कोमलतालाई केवल पर्याप्त तेलमा त्राउन आवश्यक छ र त्यसपछि तिनीहरूमा भरपर्दो मोटा नुन खन्याउनुहोस्।
फ्रिक्स वा फिलोआस
यो सत्य हो कि ती दुई बीच भिन्नताहरू छन् र यो क्षेत्र मा पनि निर्भर गर्दछ। यस कारणले गर्दा, केहि सुँगुरको रगतले तयार पारिएका हुन्छन्, जबकि अरूलाई मिठाईको स्पर्श पनि प्रदान गरिन्छ जब कि सौंफ र दुधको आधारमा पनि। हुन सक्छ कि यो, यो सबै भन्दा स्वादिष्ट डेसर्ट मध्ये एक हो, जुन तिनीहरू प्राय: कार्निभलमा लिन्छन्। यद्यपि बर्षको बाँकी मा तिनीहरू जस्तै स्वादिष्ट लाग्नेछ।
कफि लिकुर वा पोमेस क्रीम?
यी सबै व्यंजनहरू र डेसर्टहरू पछि, जसले हामीलाई एक महान भोजको बारेमा कुरा गर्न डो .्याउँछ, पोमसको शट जस्तो 'खाना कम गर्न' केही छैन। पाचन गर्न केहि आधारभूत। तपाईं जडिबुटी पोमास वा पोमस क्रीम पाउन सक्नुहुन्छ, केही नरम। तर यो सत्य हो कि लाइसेर क्याफे यो गलिसियाको ग्यास्ट्रोनमीमा रहेको अर्को मुख्य स्टेपल्स हो किनकि यो यसको लागि सधैं राम्रो साथी हुन्छ। वा के तपाइँसँग हिम्मत गर्नुहुन्छ? जलेको र यसको स्पेलिक ग्यालिसियाको पेटमा?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » गैलिसियन ग्यास्ट्रोनोमी
कज्कोमा के हेर्ने